Mudane Cabdishakuur ayaa sheegay in Madaxtooyada iyo Hay’adda Nabadsugida eey ku hoowlan yihiin xil ka tuurista Madaxweeyne yaasha Maamul goboleedyada Soomaaliyeed ee Galmudug iyo Hirshabeelle isagoo sheegay ineey weliba horayna ugu mashquulsanaayeen hurinta colaad siyaasadeed ee Jubaland iyo hanjabaad joogta ah ee Somaliland.
Mr Cabdshakuur ayaa ugu baaqay madaxda dalka ineey ka shaqeeyaan isu soo dhoweeynta dadka soomaaliyeed oo eeysan kala geeyn. Waxaana hadalkiisii ka mid ahaa” Hoggaanka Soomaaliya horumarkiisa waxaa halbeega u ah inta ay la egtahay isku heeyta iyo isku soo dhoweeynta dadka iyo deegaanada soomaaliyeed”.
Cabdishakuur ayaa ugu danbeeystii ugu baaqay madaxda dowladaFederaalka in eey isku hoowlaan isku soo dhoweeynta iyo dhisida kalsoonida dadka Soomaaliyeed ee kala irdhoobay.
Waxaa jira warar isa soo tarayey oo sheegaya in madaxtooyadu u yeertay masuuliyiin ka tirsan maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle kuwaas oo aaneey madaxweeynayaashoodu ka war heeyn waxa loogu yeeray.
Horay ayey dowlada federaalku u fargelisay Maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle labadaba kuwaasioo ah maamulo curdan ah uguna danbeeyey maamul goboleedyadii eey dhistay dowladii Madaxweeyne Xasan shiikh.